ရွှေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် |5£ slots အခမဲ့အပိုဆု | ကာစီနိုဗြိတိန်အွန်လိုင်းကာစီနို
ရွှေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူသိပ္ပံအားကစားပြိုင်ပွဲ platform ပေါ်တွင်လည်ပတ်တဲ့ slot ကဖြစ်ပါတယ်5reels,4အတန်းနှင့်ထံမှအထိ paylines ၏နံပါတ် 10 သို့ 100. ဤသည် slot က Native Americans တွေကနေသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုဆွဲယူနှင့်တစ်ခုအားသာချက်နဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်5£ slots အခမဲ့အပိုဆု. ဤသည်လောင်းကစားရုံလောင်းကစားဂိမ်းသိပ္ပံအားကစားပြိုင်ပွဲအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များမဆိုမှာပါပေးထားနိုင်ပါတယ်.
5 ဂိမ်း£ဒီ slot မှာကစားပွဲအတွက်အခမဲ့အပိုဆုထားပါ
5 တိုင်းလှည့်ဖျားဘို့ 10p ကနေ£ 500 မှကွဲပြားတဲ့လောင်းကစားအကွာအဝေးရှိပြီး£ဒါကအခမဲ့အပိုဆု Slots. အဆိုပါကစားကတ်များတစ်ဦးပါဝင်သည်သောအံ့သြဖွယ်ဇာတိအမေရိကန်စတိုင်ပိုင်သင်္ကေတကိုကိုယ်စားပြုသည်, K သည်, မေး, J ကိုနဲ့ 10 ဝံနှင့်အတူ, squaws, အကြီးအကဲများနှင့် Totem. အဆိုပါရိုင်းနဲ့ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများနောက်ထပ်သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်.
အဆိုပါဖြန့်ကြဲသင်္ကေတရွှေအပိုဆုခေါင်းစဉ်ကကစားသမားသူတို့သုံးဆုကြေးငွေ features တွေဆော့ကစားတဲ့အခါမှာအနိုင်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းနေသည်. သုံးသို့မဟုတ်ဤသင်္ကေတများထက်ပိုသုံးလေယာဉ်ဆင်းသက်တွင်, အဆိုပါအပိုဆုဘီးကိုသင်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်, သငျသညျသုံးဆုကြေးငွေ features တွေဖို့လမ်းကြောင်းပေးခြင်း. သငျသညျအံ့သြဖွယ်ငွေသားဆုနှင့်အတူဆုခခြံများနှင့်အိမ်ကကြီးမားကျယ်ပြဆုကြေးငွေယူနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ.
ဒီသုံးယောက်အပိုဆုထူးခြားချက်များ5ဂိမ်း£အခမဲ့အပိုဆု Slots
ရွှေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တစ်ဦး '' ငွေ Canyon အ '' အင်္ဂါရပ်ရှိ. ဒီနေရာတွင်တစ်ခုအံ့သြစရာ Canyon အလမ်းကြောင်းတလျှောက်ရွှေ့မည်. ကြာကြာသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကို, သငျသညျအရပိုဆုလာဘ်. အမြင့်ဆုံးပေးချေမှုသင့်ရဲ့အကူတိုင်များစိုက်ထူတန်ဖိုးကို 500x ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါအပိုဆုဘီးလေးခုကြဲဖြန့်သင်္ကေတများနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ရရှိသည့်အခါသတိပြုပါ, သငျသညျ ပို. ပင်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်.
5 ဂိမ်းကိုသင် Totem ထမ်းဘိုးကိုတက်ပြီးနှငျ့သငျအစုရှယ်ယာတိုးပွားစေလိမ့်မယ်တဲ့ဆုလာဘ်အဖြစ်ကပါဝင်ပတ်သက်£ဒီ၏ 'Totem စည်းစိမ်ဥစ္စာ' 'အင်္ဂါရပ်အခမဲ့အပိုဆု Slots. သုံးယောက် Totem ထမ်းဘိုးကိုမဆိုတဦးတည်းကို Select လုပ်ပါနှင့်သင်တိုင်းအနိုင်ရသင်ယခင်အနိုင်ရရှိထက်ပိုဆုချလိမ့်မည်ဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာလိမ့်မယ်. နောက်တဖန်သင်တို့ကို 500x သင့်ရဲ့အလောင်းအစားပေါင်းလဒ်ပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျလေးကြဲဖြန့်သင်္ကေတဖမ်းပြီးလျှင်သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်, ဤသူသည်သင်တို့အပိုဘဝကိုဆွဲယူပါလိမ့်မယ်အဖြစ်.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အခမဲ့လှည့်ဖျားအင်္ဂါရပ်ဆု5အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ3ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများနှင့် 10 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ4ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများ. ဒီ feature ခြေရင်းဂိမ်းကာလအတွင်း activated နိုင်ပါသည်. တဦးတည်းလေယာဉ်ဆင်းသက်တွင်, နှစ်, သုံးလေးအပိုဆုသင်္ကေတဦးတည်းအားငါပေးမည်, နှစ်, ဆုကြေးငွေသင်္ကေတများမှသက်ဆိုင်ရာလေးသို့မဟုတ်ပင်တစ်ဆယ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ.
အကြီးသင်္ကေတများကိုပုံ ထား. တောရိုင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့်အခါတက်ပြသပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါး reels ကျယ်ပြန့်ဆိုလိုတာကသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအမြင့်မှချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်. တိုင်းလှည့်ဖျားဘို့တစ်လောင်းကစားငွေပမာဏနှင့်အတူထက်နည်း£2ကစားခြင်းကနေ paylines ကိုတိုးပွါးစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ paylines အရေအတွက်ပြောင်းလဲရလိမ့်မယ် 10 သို့ 50. အဆိုပါလောင်းကစားငွေပမာဏကိုလှည့်ဖျားနှုန်းထက်ပိုမို£2လျှင် payline အရေအတွက်ကိုကနေကိုတိုးပွါးစေ 20 သို့ 100.
အဆိုပါဂိမ်းအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအချို့အကျိုးကျေးဇူးများကိုရွှေဦးစီးချုပ်အတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ပေးအတွက်ရရှိလာတဲ့ရိတ်နိုင်သည့်အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးသော features တွေ embedded ထားပါတယ်. ဒီ slot ကများအတွက် RTP ဖြစ်ပါသည် 94.12% နိမ့်လောင်းကစားငွေပမာဏနှင့် 98.12% မြင့်မားသောလောင်းကစားငွေပမာဏများအတွက်. ပျော်စရာ၏အံ့သြဖွယ် features တွေနဲ့ဝန်နှင့်အတူထုပ်ပိုး, ဒီ5£အခမဲ့အပိုဆု Slots ယနေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးထိုက်သည်.